I-china iphoqa ukondla abakhiqizi bemishini yokuthambisa Imishini Yokuceba
phoqa ukondla umshini wokuthambisa
Iyisilinda yensimbi, evame ukwenziwa ngensimbi ye-alloy noma ipayipi lensimbi elihlanganisiwe elihlanganiswe ngensimbi ye-alloy engamelana nokushisa, engamelana nokucindezela okukhulu, eqinile, engagqokiwe, futhi engamelana nokubola.
(2) umgqomo: Uyisilinda sensimbi, ngokuvamile esenziwe ngensimbi ye-alloy noma ipayipi lensimbi elihlanganisiwe elihlanganiswe ngensimbi ye-alloy engamelana nokushisa, engamelana nokucindezela okukhulu, eqinile, engagqoki, futhi engamelana nokubola. Umgqomo nesikulufu kuyalinganiswa ukubona ukuchobozwa, ukuthamba, ukuncibilika, ukufakwa kwepulasitiki, ukuqeda nokuxinana kwepulasitiki, nokulethwa okuqhubekayo nokufana kwezinto zenjoloba ohlelweni lokubumba. Ngokuvamile, ubude bomgqomo buphinda izikhathi eziyi-15-30 ububanzi, ukuze ipulasitiki ishiswe ngokuphelele futhi ifakwe ipulasitiki njengesimiso.
(3) I-Hopper: Phansi kwe-hopper kunedivayisi yokusika ukulungisa nokunqamula ukugeleza kwempahla. Uhlangothi hopper ifakwe imbobo emehlweni kanye idivayisi Samandla.
(4) Ikhanda lomshini nesikhunta: Inhloko yomshini yakhiwe ngomkhono wangaphakathi wensimbi yensimbi nomkhono wangaphandle wensimbi. Inhloko yomshini ifakwe isikhunta esakha. Umsebenzi wenhloko yomshini ukuguqula ukuncibilika kwepulasitiki okujikelezayo kube ukunyakaza okuhambisanayo, okufana nokuqinile. Hola emkhonweni wesikhunta, bese unikeza ipulasitiki ingcindezi edingekayo yokubumba. Ipulasitiki yenziwe yafakwa epulastikini futhi yahlanganiswa emgqonyeni, futhi igelezela ekufeni okubunjiwe kwentamo yensimbi ngokusebenzisa ipuleti lokuhlunga elinamaphampu ngasendleleni ethile yokugeleza. Umkhono wokufa nomkhono wokufa uqondaniswe kahle ukwakha igebe lonyaka ngokuncipha kwesigaba esiphambanweni, ukuze ukuncibilika kwepulasitiki kukwi-Tubular tubular eqhubekayo futhi eminyene kwakhiwa ezungeze ucingo olungumongo. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi indlela yokuhamba kwepulasitiki kufayo inengqondo futhi isuse i-angle efile yepulasitiki enqwabelene, kuvame ukufakwa umkhono we-shunt. Ukuze kuqedwe ukushintshashintsha kwengcindezi ngesikhathi sokukhishwa kwepulasitiki, kufakwa indandatho yokulinganisa ingcindezi.
(5) Umgqomo omkhulu womshini usebenzisa ukushisa kagesi, futhi ukupholisa amanzi kulawula ngokuzenzakalela ukushisa komgqomo. Umongo wesikulufu ungapholiswa ngamanzi (uwoyela) ukulawula ukushisa kwesikulufu. Inhloko yomshini ifakwe inzwa yengcindezi yokuhlola ukushisa okuncibilikayo nengcindezi.
Indawo efile epholile emoyeni ukusika ngentshiseko, umshini osizayo we-granulating, kanye ne-blade ejikelezayo iqhutshwa yimoto ye-AC, umthethonqubo wokuguqula isivinini semvamisa; uhlelo lokomisa ukomisa amanzi emzimbeni lwakhiwa i-centrifugal dehydrator, isikrini sokudlidliza isigubhu, umgqomo wokugcina ophephethwa ngumoya nokunye.
1. I-single-screw granulator ihlanganisa ukuhambisa, ukuphakela, ukukhipha, ukufudumeza komoya opholile oshisayo, nokupholisa okuphakelayo komoya ukuze kutholakale ukusebenza okuqhubekayo okuzenzakalelayo. I-granulator eyodwa-isikulufa esinjalo inekhono eliphezulu lokukhiqiza;
2. I-single-screw granulator inezingxenye zokuxuba, ukondla nokukhipha ngaphakathi kwangaphakathi. Ngokuya ngokhetho lwekhasimende, kungasetshenziswa ukushisa kagesi, ukushisa kwe-steam noma ubuchwepheshe bokushisa obushisayo bukawoyela. Ngokuya ngezidingo zayo zokulawula ukushisa, izidingo zokushisa nazo zisuselwa ezintweni ezahlukahlukene ezizokhiqizwa. Okuhlukile.
3. Isixubi sisebenzisa ubuchwepheshe bekhamera yokuxuba emelana nokwehlukana okunezinhlangothi ezine ", esebenza kahle kakhulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukufakwa kwepulasitiki okwanele nokusabalalisa okufanayo;
4. Idivayisi yokuphakela isebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile benkampani, obungasiza ekuxubeni kwezinto ezixubekile futhi baphoqele ukuphakelwa kwesikulufa esisodwa ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle nekhwalithi yegranulation;
5. Kokubili isikulufa sesigaxa esiphindwe kabili kanye nesikulufa esisodwa kuqhutshwa ubuchwepheshe bokuguqula imvamisa ye-AC, engakwazi ukuzivumelanisa nezidingo ezahlukahlukene zobuchwepheshe;
6. Ingaphambili lekhanda lomshini lamukela umshini wokubacindezela oshintsha umshini osheshayo, osindisa isikhathi nomzamo futhi ulungele imvelo;
7. I-granulator isebenzisa ikhanda lokusika elijikelezayo nedivayisi yokuhlela kahle i-granulation eshisayo epholile yomoya;
8. Ukupholisa kwama-pellets kusebenzisa isihlukanisi se-cyclone ukuhambisa kanye ne-drum cooler noma i-disc vibrating screen;
9. Uhlelo lokulawula ugesi lwamukela i-PLC, isikhombimsebenzisi esibonakalayo kanye nobuchwepheshe bokuguqula imvamisa ukuze kufinyelele inqubo ephelele yokulawula okuzenzakalelayo.
ama-degree amabili we-single-screw pelletizing machine
umshini owodwa-isikulufa pelletizing
umshini wesigaba esiphindwe kabili we-extrusion pelletizing
SJ150 pelletizing extrusion umshini
okufana newele isikulufa extruder
umshini we-agglomerator pelletizing